Chii chinorema basa wega kucheka mechinch anchor bhaudhi?
Chii chinorema basa wega kucheka mechinch anchor bhaudhi? Hunhu hwekuzvicheka-pasi mechimina anchor bhaudhi? 1. Iine kugona kutakura kugona. 2. Iine basa rekucheka mu substrate pachega pasi pechiito chekutambudzika. 3. Iko kunenge kusine kushushikana kwekuwedzera mune zvakasikwa e ...
Iwe unoziva kusiyanisa tekinoroji yekudyara, kemikari anchor bhaudhi, yekuwedzera bhaudhi uye mehendi bhaudhi?
Tumira anchoring tekinoroji ikozvino yave kushandiswa mune yekusimbisa indasitiri dzimwe nzira dzekusimbisa, post yekumisikidza tekinoroji seyakazara inowanzo kuve yakakamurwa kuita: kemikari yekudyara simbi, yekunamatira anchor bhaudhi, mechina anchor bhaudhi, yekuwedzera anchor bhaudhi. Kemikari yekudyara simbi bhaa Kudyara kwemakemikari ...
Kuisirwa nzira yeTianhou yekuzvicheka kucheka chinamira bhaudhi
Kuisirwa nzira yeTianhou yekuzvicheka kucheka chinamira bhaudhi Tianhou kuzvidzora kuchereka chinamira bhaudhi ine kuzvidzora kucheka mechina kukiya maitiro uye haidi yakakosha reaming zvishoma. Zviri nyore kuisa, kuvimbika mukuita, uye kunogona kusimbiswa nekusimbisa. Kana iyo sikuru ikasimbiswa kune iyo installa ...
Seiko anokuudza zvinhu zvinokanganisa mashandiro emakemikari anchor bolt
Handan Jinggong kuvaka anchor Kugadzira Co, Ltd ibhizimusi repamusoro-soro rinoshanda mukutsvagisa, kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye basa rekuvaka zvikamu zveanchor. Iine ruzivo rwakapfuma mumakemikari anchor bolt. Seiko kuvaka kunonzwisisa zvinhu zvinokanganisa mashandiro e ...
Iine makore mazhinji ekugadzira uye ekugadzira ruzivo, ine yayo yega galvanizing chirimwa
Ndeapi matanho evimbiso yemhando yekemikari anchor bhaudhi yekuvaka? 1) Iyo yekuvaka ichaitwa zvine mutsindo zvinoenderana nehunhu hunodiwa uye dhizaini yezvinodiwa zvinoenderana. 2) Mushure mekuchera nzvimbo mutsara wakatarwa, zvinofanirwa kuziviswa kune th ...